”Siyaasni sabummaa sodaa nageenyaa biyyattii isa guddaadha”- Gorsaa Ministira Muummee Abiyyi Ahmad - | - OBN
”Siyaasni sabummaa sodaa nageenyaa biyyattii isa guddaadha”- Gorsaa Ministira Muummee Abiyyi Ahmad
OBN Bit. 28, 2011- Siyaasni sabummaa sodaa nageenyaa biyyattii isa guddaa akka ta'e gorsaa dhimmoota nageenyaa ministira mummee kan ta'an Obbo Tamasgan Xirunah ibsa har'a miidiyaaleef laataniin himaniiru.
Ibsa hojiilee rifoormii wagga tokko darbe dhaabbilee tasgabbii, nageenya fi odeeffanoo keessatti hojjetamaa turan ilaalchisuun kennaniin "haala kanaan dura hin mul'anneen waldhabdeen namoota dhuunfaalle bifa sabummaa akka qabaatu taasifamaa jira" jedhan.
Walitti bu'iinsa fi buqqa'iinsawwan iddoowwan tokko tokkotti uummamanif hoggantoota fi qaamoleen dhaabbilee tasgabbii, nageenya fi odeeffanoo jijjiramicha hin fudhanne harka keessaa qabaachuu isaanii shakkina jedhan gorsaan kun.
Haala amma jirun keessattuu ji'oota jahaa as garuu naannoo kamiyyuu keessatti rakkoon osoo hin uummamin dura odeeffannoo kennuun hirmaachaa jirra jedhan.
Gama biraatin sochiin meeshaalee waraanaa seeraan alaa ji'oota jahan darbanitti sadarkaa olaanaan xiqqaachusaa kan himan Obbo Tamasgan "hojiin rifoormii dhaabbilee tasgabbii, nageenya fi odeeffanoo keessatti hojjetamaa ture bu'aa argamsiisee jira" jedhan.
Haaluma kanaan hojii ijaarsa dhaabbilee irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa turen dhabbileen tasgabbii, nageenya fi odeeffanoo gama hojimaataa, caaseffamaa fi hooggansaan akka jijjiiraman taasifameeras jedhan.
Dhaabbileen afran hojiin rifoormii keessatti hojjetamaa ture raayyaa ittisa biyyaa, tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa, ejansii nageenya netwoorkii odeeffannoo (INSA) fi poolisii federaalaa akka ta'an obbo Tamasgan himaniiru.
Hooggantoonni dhaabbilee tasgabbii, nageenyaa fi odeeffanoo yeroo garaagaraatti uummatarraa gaafiin irratti ka'aa ture kan jedhan gorsaa dhimma nageenya biyyaalessaa ministira mummee kan ta'an Obbo Tamasgan, kanaan dura hooggansa dhaabbilee kunneen keessatti olaantummaan saba tokko mul'achaa ture jedhan.
Kanaafis dhaabbileen kunneen hirmaannaa sabaaf sablammootaa bifa qabuun namoota dandeettii qabanin akka hogganaman taasifameera jedhan.
"Hoggantootni dhaabbilee tasgabbii, nageenya fi odeeffanoo yakkoota garaagaraa raawwataa turanis seeratti akka dhiyaatan taasifameera" jedhan Obbo Tamasgan.
Kana malees hoggantootni rakkoo dandeetti qaban iddoo dandeetti isaanin walgitutti akka ramadaman gochuu fi hoggantootni umriin isaanii sooramaaf gahes soorama akka bahan taasifamuu isaas dubbatan.
Bilisummaa Siyaasaa fi hojimaata
Komiiwwan dhaabbilee tasgabbii, nageenya fi odeeffanoo biyyattii irratti gama uummataan ka'aa turan keessaa tokko gartummaa dhaabbilee siytaasaati.
Gama kanaan hooggantootni fi hojjetootni biroon dhaabbilee kunneenii miseensummaa dhaabbilee siyaasaa irraa bilisa akka ta'anif fi walitti dhufeenyi ummata walin qaban akka fooyya'u hojjetamuu isaati kan isaan himan.
Dandeettii ogeeyyii tasgabbii, nageenya fi odeeffanoo cimsuufis dhaabbilee tikaa, odeeffannoo fi qorannoo biyyaalee garaagraa irraa muuxxannoo akka fudhatan taasifamuusaas obbo Tamasgan kan dubbatan.
"Ameerikaadhaa FBI fi CIA irraa, Raashiyaadhaa KGB irraa akkasumas biyya Isaraa'el irraa beekumsa tasgabbii, nageenya fi odeeffanoo akka argatan taasifameera" jedhan.
"Tajaajilli odeeffannoo fi tika biyyaalessaa ofiif odeeffannoo walitti qabaa ofumaaf namoota hidhaa ture" kan jedhan Obbo Tamasgan dhaabbileen hojii isaan ilaallatu qofa akka hojjetan ta'uusaa himan.
Walitti bu'iinsa uummata walin uummamu…
"Naannoleen humnootii nageenyaa mataa isaaniitin nagaa naannoo isaanii akka eegsisan aangoon kennamufis dhaabbileen tasgabbii, nageenya fi odeeffanoo sadarkaa federaalaa jiran kunneen beekkamti naannoleen ala ergamawwan bahachaa fi lammiilee qabanii fudhachaa turan" jedhan gorsaan dhimmoota nageenyaa ministira mummee Obbo Tamasgan Xirunah.
Kana malees uummatni mirga dimokiraasii isaa yeroo fayyadamu qaamoleen dhaabbilee tasgabbii, nageenya fi odeeffanoo uummata walin walitti bu'aa akka turan dubbatan.
Kanaanis "himatni federaalli heeyyama yookin gaafi keenya malee seene jedhu naannolee irraa dhiyyaachaa ture" jedhan.
Hojii riffoormii waggaa tokko darbe hojjetameen garuu humnootin nageenyaa federaalaa yeroo rakkoon uummame humna naannoleen ol ta'e qofa akka seenan hojjetamuusaa obbo Tamsgan himan.
228 Views 4/7/19